संसदीय दलमा देउवासँग भिड्दै प्रकाशमान | Rajmarga
काठमाडौ । कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचनमा संस्थापन पक्ष नै हाबी हुने देखिएको छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचनमा नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका धेरै नेता बिजयी भए पनि समानुपातिकतर्फ निर्वाचन आयोगमा बुझाएको सूचिको प्राथमिकताका आधारमा सांसद छनौंट गरिए सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष हाबी हुने देखिएको छ।
समाचार अनुसार रामचन्द्र पौडेल खेमाका प्रकाशमान सिंह देउवासँग संसदीय दलको नेताका लागि भिड्ने तयारीमा छन्। महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र कोषाध्यक्ष सितादेवी यादको पनि दावी भए पनि सिंह नै उम्मेदवार बन्न सक्ने बताइएको छ।
अर्कातिर संसदीय दलको नेता जित्ने अवस्था नभए आफू नउठ्ने भएका कारण पनि सिंह नै संसदीय दलको नेताका लागि उम्मेदबार बन्ने लगभग पक्का भएको छ।
लको नेतामा देउवाको तयारी
नेता रामचन्द्र पौडेल प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएपछि उनको खेमाबाट महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह र कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव संसदीय दलको नेताका दाबेदार हुन् । त्यसमध्ये पनि सिंह प्रमुख दाबेदार हुन् । संसदीय दलमा जित्ने अवस्था नभए महामन्त्री कोइराला उम्मेदवार नबन्ने मनस्थितिमा छन् । तर, सिंह भने देउवाको प्रतिस्पर्धीका रूपमा आपूmलाई स्थापित गर्न पनि उम्मेदवार बन्न तयार छन् । ‘महामन्त्री कोइरालाले इच्छा नदेखाए प्रकाशमान दाइ उम्मेदवार बन्ने देखिन्छ,’ केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले भने । केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि नेता सिंह सभापति देउवाविरुद्ध आक्रामक ढंगले प्रस्तुत भएका थिए ।नयाँ पत्रिकामा खबर छ।
Previous post: प्रहरीमा बेथिति निम्त्याउन देउवा नै उद्दत
Next post: सरकारी ढुकुटी वाणिज्य बैंकहरुमा राख्ने तयारी